မြန်မာနိုင်ငံဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသမီး(၁၀)ဦးရဲ့ အလှဆုံးအကယ်ဒမီဖက်ရှင်များ - Cele GabarCele Gabar
ဒီနှစ်မှာ ရွှေကစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီ ပွဲတက်ဖက်ရှင်လ်ကတော့ သူမကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပုစွန်ဆီရောင်လေးဖြစ်ပြီး သူမနဲ့ တကယ်ကို လိုက်ဖက်ညီမှုရှိလွန်းလှပါတယ်။မိတ်ကပ်ကိုတော့ မေဦး (magic) ကပြင်ဆင်ပေးထားပြီး ဒီဇိုင်နာက တော့ ကိုမင်းသက်စံ (Sweet & Smart Fashion Collection) မှ ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်သလို ဒီဝတ်စုံရဲ့ တန်ဖိုးဝန်းကျင်ကို သိန်း ထောင်ဂဏန်းဝန်းကျင်မှာ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
ထုတ်လုပ်ရေး နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတချို့ရဲ့ ပိုင်ရှင် မင်းသမီးလေး မိုးကတော့ ဒီနှစ်မှာ ရိုးရှင်းစွာ ငွေမျှင်ရောင်လေးနဲ့ ပွဲတက်ခဲ့ပြီး ၀တ်စုံနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ တန်ဖိုးအားလုံးကို သိန်းသောင်းဂဏန်းဝန်ကျင် မှာ ခန့်မှန်းရပြီး မိတ်ကပ်ကတော့ မေဦး(Magic) နဲ့ ၀တ်စုံရဲ့ ဒီဇိုင်နာက တော့ ဖြိုးကို ဖြစ်ပါတယ်။
ဇကာတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးစာရင်းမှာ အူဝဲရဲ့ ကြတ်ဂူ မပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ဒီနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီကို မှန်းထားပုံမရသလို အားပေးဖို့သက်သက်ပွဲတက်လာခဲ့တဲ့ အူဝဲကတော့ ဒီဇိုင်နာ အိကျော်ဇင် ( Vivid Fashion ) ရဲ့ ပတ္တမြားရောင် နဲ့ ပန်းမိတ်ကပ်နုရောင် တွဲဖက်ထားတဲ့ ၀တ်စုံနဲ့ ပွဲတက်လာခဲ့ပြီး မဟာဆန်ဆန် နောက်တွဲဆံထုံး ခပ်ကြီးကြီးလေးထုံးထားတာကို မြင်တွေ့ရရမှာပါ။
တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့ အလှနတ်သမီးတပါးအဖြစ် ရွှေအဆင်းတွေ လွှမ်းခြုံလို့ ပွဲတက်ရောက်လာသူလေးက မအေးသောင်းဖြစ်ပြီး မိတ်ကပ် မေဦး (magic) ပြင်ဆင်ခြယ်သပေးကာ ၀တ်စုံကို တော့ ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံ (Sweet & Smart Fashion Collection) မှ ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ ဇာတ်ပို့ အမျိုးသမီးဆုကို မအေးသာင်းကို ပရိသတ်တွေက အရမ်းကို ရစေချင်ပေမဲ့လည်း အကယ်ဒမီနဲ့ လွဲခဲ့ရတဲ့ အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။
ဒီနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ ဆုကို ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မမြတ်လေးက ရရှိခဲ့ပြီး အေးမြတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ထင်မထားရလောက်အောင် ၀မ်းသာပီတီဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီဖက်ရှင်လ်မှာတော့ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အဖြူရောင်၊ ငွေမျှင်ရောင် ဖောက်ချိတ်လေးနဲ့ အတူ ခပ်မြင့်မြင့်ဆ့ထုံးလေးမှာ အဖြူရောင်သစ်ခါလေးတွေ ပန်ဆင်ထားတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒီနှစ်ရဲ့ ဇကာတင် အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်စာရင်းတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ရန်သူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ချီချီအတွက် ပထမဆုံးကားဖြစ်သော်လည်း မျက်နာသစ်မင်းသမီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ ခုလို အခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ ချီချီကတော့ ဒီနှစ်မှာ အပြာရောင် ရေခဲတောင်နဂါးကို Inspired ယူလို့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်နာ Ahlatt Lumyang ရဲ့ ၀တ်စုံဖြစ်ပြီး တကယ့်ကို ဖက်ရှင်ကျသလို ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
လိမ္မော်ရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ထင်ရှားလှပနေတဲ့ မင်းသမီးလေး စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ ဒီဇိုင်နာ ကောင်းမြတ် (Haute Couture ) ရဲ့ ၀တ်စုံ နဲ့ ပွဲတက်လာတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မိတ်ကပ်ကို တော့ အေပရယ်သုတ က ဖန်တီးလိမ်းခြယ်ပေးထားပါတယ်။
မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုကတော့ ဒီနှစ်ရဲ့အကယ်ဒမီ ပေးပွဲဆုကို လိမ္မော်ရောင်၊ ပန်းရောင်နဲ့ ရွှေရောင် ဖက်စပ်လို့ ငှက်မလေးအသွင်ဝတ်စုံလေးကို ၀တ်ဆင်လာခဲ့ပြီး သူမ၀တ်စုံရဲ့ ဒီဇိုင်နာကတော့ စုနန္ဒာလှိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ စူစူ ၀တ်စုံလေး က အမြင်တမျိုးဆန်းနေတယ် ဟုတ်…?
ဒီနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီ ဇာတ်ဆောင်အမျိုးသမီးဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်လေးကတော့ စိတ်မကောင်းစွားနဲ့ပဲ ယဉ်တိုက်မှုကြောင့် လက်ကျိုးနေသော်လည်း ပွဲလေးကို ဖြစ်အောင် တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာ ကိုဖြိုးကို (Extraordinary Fashion Team) ဖန်တီးပေးထားသော ငွေမျှင်ရောင် ၀တ်စုံလေးမှာ စိန်တွေအပြည့် စီခြယ်ထားပြီး သိန်းသောင်းဂဏန်းတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ Make Up & Hair Artist ကတော့ တီခိုင်၊တီချို (HELLO) မှ ပြင်ဆင်ပေးထားပြီး ဖွေးရဲ့ ၀တ်စုံလေးဟာလည်း စိန်တလက်လက်နဲ့ တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေခဲ့ပါတယ်။
နွေဦးရဲ့ ငှက်မလေးအသွင် နဲ့ ပုစွန်ဆီရောင် ငှက်တောင်မွှေးလေးတွေ ပါဝင်လို့သစ်ရွက်ဖတ်လေးတွေ အပြည့်စီခြယ်ထားပြီး ဒီဇိုင်နာ Ahlatt Lumyang ဖန်တီးထားသော သင်ဇာ ရဲ့ ၀တ်စုံလေးကလည်း အမြင်တမျိုးဆန်းလို့ နေပြန်သလို ဆံပင်ပြင်ဆင်မှုလည်း ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ လှပနေပြန်ပါတယ်။
ဒီနှဈမှာ ရှကေဈရဲ့ အကယျဒမီ ပှဲတကျဖကျရှငျလျကတော့ သူမကိုယျတိုငျ ရှေးခယျြထားတဲ့ ပုစှနျဆီရောငျလေးဖွဈပွီး သူမနဲ့ တကယျကို လိုကျဖကျညီမှုရှိလှနျးလှပါတယျ။မိတျကပျကိုတော့ မဦေး (magic) ကပွငျဆငျပေးထားပွီး ဒီဇိုငျနာက တော့ ကိုမငျးသကျစံ (Sweet & Smart Fashion Collection) မှ ဖနျတီးပေးထားတာဖွဈသလို ဒီဝတျစုံရဲ့ တနျဖိုးဝနျးကငျြကို သိနျး ထောငျဂဏနျးဝနျးကငျြမှာ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ။
ထုတျလုပျရေး နဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးစုတခြို့ရဲ့ ပိုငျရှငျ မငျးသမီးလေး မိုးကတော့ ဒီနှဈမှာ ရိုးရှငျးစှာ ငှမြှေငျရောငျလေးနဲ့ ပှဲတကျခဲ့ပွီး ဝတျစုံနဲ့ လကျဝတျရတနာ တနျဖိုးအားလုံးကို သိနျးသောငျးဂဏနျးဝနျကငျြ မှာ ခနျ့မှနျးရပွီး မိတျကပျကတော့ မဦေး(Magic) နဲ့ ဝတျစုံရဲ့ ဒီဇိုငျနာက တော့ ဖွိုးကို ဖွဈပါတယျ။
ဇကာတငျရုပျရှငျဇာတျကားကွီးစာရငျးမှာ အူဝဲရဲ့ ကွတျဂူ မပါဝငျခဲ့သျောလညျး ဒီနှဈရဲ့ အကယျဒမီကို မှနျးထားပုံမရသလို အားပေးဖို့သကျသကျပှဲတကျလာခဲ့တဲ့ အူဝဲကတော့ ဒီဇိုငျနာ အိကြျောဇငျ ( Vivid Fashion ) ရဲ့ ပတ်တမွားရောငျ နဲ့ ပနျးမိတျကပျနုရောငျ တှဲဖကျထားတဲ့ ဝတျစုံနဲ့ ပှဲတကျလာခဲ့ပွီး မဟာဆနျဆနျ နောကျတှဲဆံထုံး ခပျကွီးကွီးလေးထုံးထားတာကို မွငျတှရေ့ရမှာပါ။
တျောဝငျနနျးထိုကျတဲ့ အလှနတျသမီးတပါးအဖွဈ ရှအေဆငျးတှေ လှမျးခွုံလို့ ပှဲတကျရောကျလာသူလေးက မအေးသောငျးဖွဈပွီး မိတျကပျ မဦေး (magic) ပွငျဆငျခွယျသပေးကာ ဝတျစုံကို တော့ ဒီဇိုငျနာ မငျးသကျစံ (Sweet & Smart Fashion Collection) မှ ဖနျတီးပေးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈရဲ့ ဇာတျပို့ အမြိုးသမီးဆုကို မအေးသာငျးကို ပရိသတျတှကေ အရမျးကို ရစခေငျြပမေဲ့လညျး အကယျဒမီနဲ့ လှဲခဲ့ရတဲ့ အရမျးကို စိတျမကောငျးဖွဈနကွေပါတယျ။
ဒီနှဈရဲ့ အကယျဒမီအမြိုးသမီးဇာတျပို့ ဆုကို ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့ထားတဲ့ မငျးသမီးတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ မမွတျလေးက ရရှိခဲ့ပွီး အေးမွတျသူကိုယျတိုငျကလညျး ထငျမထားရလောကျအောငျ ဝမျးသာပီတီဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ဒီနှဈရဲ့ အကယျဒမီဖကျရှငျလျမှာတော့ အရိုးရှငျးဆုံးနဲ့ အဖွူရောငျ၊ ငှမြှေငျရောငျ ဖောကျခြိတျလေးနဲ့ အတူ ခပျမွငျ့မွငျ့ဆ့ထုံးလေးမှာ အဖွူရောငျသဈခါလေးတှေ ပနျဆငျထားတာကို မွငျတှရေ့မှာပါ။
ဒီနှဈရဲ့ ဇကာတငျ အကယျဒမီရုပျရှငျစာရငျးတှထေဲမှာ တဈခုအပါအဝငျဖွဈတဲ့ ရနျသူ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကတော့ ခြီခြီအတှကျ ပထမဆုံးကားဖွဈသျောလညျး မကျြနာသဈမငျးသမီးတဈယောကျ အနနေဲ့ ခုလို အခှငျ့အရေးမြိုးဆိုတာ မလှယျလှပါဘူး။ ခြီခြီကတော့ ဒီနှဈမှာ အပွာရောငျ ရခေဲတောငျနဂါးကို Inspired ယူလို့ ဖနျတီးထားတဲ့ ဒီဇိုငျနာ Ahlatt Lumyang ရဲ့ ဝတျစုံဖွဈပွီး တကယျ့ကို ဖကျရှငျကသြလို ထူးခွားတဲ့ ဒီဇိုငျလေးဖွဈပါတယျ။
လိမ်မျောရောငျဝတျစုံလေးနဲ့ ထငျရှားလှပနတေဲ့ မငျးသမီးလေး စံရတီမိုးမွငျ့ကတော့ ဒီဇိုငျနာ ကောငျးမွတျ (Haute Couture ) ရဲ့ ဝတျစုံ နဲ့ ပှဲတကျလာတာဖွဈပွီး သူမရဲ့ မိတျကပျကို တော့ အပေရယျသုတ က ဖနျတိးလိမျးခွယျပေးထားပါတယျ။
မငျးသမီးခြောလေး အိခြောပိုကတော့ ဒီနှဈရဲ့အကယျဒမီ ပေးပှဲဆုကို လိမ်မျောရောငျ၊ ပနျးရောငျနဲ့ ရှရေောငျ ဖကျစပျလို့ ငှကျမလေးအသှငျဝတျစုံလေးကို ဝတျဆငျလာခဲ့ပွီး သူမဝတျစုံရဲ့ ဒီဇိုငျနာကတော့ စုနန်ဒာလှိုငျ ဖွဈပါတယျ။ စူစူ ဝတျစုံလေး က အမွငျတမြိုးဆနျးနတေယျ ဟုတျ…?
နှဦေးရဲ့ ငှကျမလေးအသှငျ နဲ့ ပုစှနျဆီရောငျ ငှကျတောငျမှေးလေးတှေ ပါဝငျလို့သဈရှကျဖတျလေးတှေ အပွညျ့စီခွယျထားပွီး ဒီဇိုငျနာ Ahlatt Lumyangဖနျတီးထားသော သငျဇာ ရဲ့ ဝတျစုံလေးကလညျး အမွငျတမြိုးဆနျးလို့ နပွေနျသလို ဆံပငျပွငျဆငျမှုလညျး ခပျမိုကျမိုကျနဲ့ လှပနပွေနျပါတယျ။
ဒီနှဈရဲ့ အကယျဒမီ ဇာတျဆောငျအမြိုးသမီးဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဖှေးစိနျလေးကတော့ စိတျမကောငျးစှားနဲ့ပဲ ယဉျတိုကျမှုကွောငျ့ လကျကြိုးနသေျောလညျး ပှဲလေးကို ဖွဈအောငျ တကျခဲ့ပါတယျ။ ဒီဇိုငျနာ ကိုဖွိုးကို (Extraordinary Fashion Team) ဖနျတီးပေးထားသော ငှမြှေငျရောငျ ဝတျစုံလေးမှာ စိနျတှအေပွညျ့ စီခွယျထားပွီး သိနျးသောငျးဂဏနျးတနျဖိုးရှိတယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ Make Up & Hair Artist ကတော့ တီခိုငျ၊တီခြို (HELLO) မှ ပွငျဆငျပေးထားပွီး ဖှေးရဲ့ ဝတျစုံလေးဟာလညျး စိနျတလကျလကျနဲ့ တဖိတျဖိတျတောကျနခေဲ့ပါတယျ။
Previous Previous post: ဘာဆုမှမရတဲ့အပေါ် ပရိသတ်တွေရင်နာနေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာကို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကား
Next Next post: အကယ်ဒမီ(၄)ဆုဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ကော်ပီလို့ ပရိသတ်တွေဆိုနေတဲ့ ရွှေကြာ ရုပ်ရှင်အပေါ် စာရေးဆရာမ ပုညခင်ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်
မွေးနေ့မှာမိခင်ဖြစ်သူကို ငွေကျပ်သိန်းတစ်ရာနဲ့ ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်
Published: December 29, 20184:05 pm
Published: February 23, 201710:14 am Updated: March 18, 20199:38 am
ဟောင်ကောင်ဒါရိုက်တာကြီးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရလို့ ကလေးစိတ်ပြန်ပေါက်သွားတဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်
Published: February 26, 201911:54 am Updated: 11:55 am
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကိုရီုးယား အနုပညာရှင်များ ရဲ့ အနုပညာအဆင့်အတန်း သတ်မှတ်မှု
Published: December 23, 20185:55 pm
ကွယ်လွန်သူ ဦးကင်းက ပုပ္ပါးတောင်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောလာတဲ့ ဟာသလူရွှင်တော် ငြိမ်းချမ်း
Published: March 10, 20194:44 pm
သရဲနဲ့ အကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့ရတာနှစ်ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီဆိုတဲ့ မေမီကိုကို
Published: March 19, 20194:32 pm
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ ကို ဝေမျှခဲ့ကြတဲ့ တီတီ နဲ့ အူဝဲ
Published: January 6, 20196:29 pm Updated: 6:47 pm